I-B&B 'Spanjaardslaan' kufutshane nombindi we-Leeuwarden
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJo
I-Bed & Breakfast 'Spanjaardslaan' ikwindlu enkulu ekumgama wokuhamba kumbindi wesixeko kufutshane ne-NHL Stenden, ithiyetha, iimyuziyam kunye neendawo zokutyela.
Amagumbi akumgangatho ophantsi we-attic athokomele kwaye athambileyo omabini anebhedi ephindwe kabini. Umgangatho unegumbi lokuhlambela labucala. Unokwenza ikofu kunye neti kwaye ube nokufikelela kwifriji. Isidlo sakusasa asifakwanga kwixabiso, kodwa nge-EUR 5.00 p. isidlo sakusasa kunye nep. cofa. ngaba oku kungalungiselelwa (kuya kulungiselelwa ngexesha lokuhlala kwakho).
Malunga nendlu; le ndlu yaqala ngo-1918 kwaye ibekwe kwisitrato esithe cwaka kufutshane neziko. Indawo ekwiattic iye yahlaziywa ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Kumalunga nohambo lwemizuzu emi-5 ukuya embindini kwaye kukho indawo yokumisa ibhasi ezantsi nje esitratweni.
Ngokuqinisekileyo uya kunikwa isitshixo sendlu, ngoko ukhululekile ukuza kwaye uhambe ngokuthanda kwakho.
Kukho igumbi lokuhlambela labucala (azikho ezinye iindwendwe!) Nesitya sokuhlambela, ishawa kunye nendlu yangasese. Ke ukuba uza wedwa, unegumbi elinye kunye negumbi lokuhlambela labucala (asiliqeshi elinye igumbi); Ukuba iqela lakho lokuhamba linabantu abangaphezu kwesibini, uya (ewe) ube nelinye igumbi kunye neli gumbi lokuhlambela kunye.
4.91 ·Izimvo eziyi-47
Iziko - 700m
Igadi yasePrince - 600m
Oldehove - 700m
Idama lokuqubha 'I-Blue Wave' - 600m
Iziko lokunyuka iNoardwand - 700m
IMyuziyam yaseFrisian (eZaailand) - 1.1 km
Ithiyetha 'De Harmonie' - 1.0 km
Pop isigaba 'Rhinoceros' - 1.0 km
Isikhululo esiPhakathi saseLeeuwarden - 1,5km
Iholo yeedolophu ezilishumi elinanye - 1,8km
Inkwenkwezi eluhlaza - 7km
Inmiddels woon ik ruim 10 jaar in één van de mooiste straten van Leeuwarden. Hierdoor ken ik het centrum behoorlijk goed en vind ik het leuk om mijn gasten de gezellige en gastvrije stad te leren kennen.
Iindwendwe zethu zamkelekile! Sithathela ingqalelo ubumfihlo njengoko undwendwe lwethu lufuna (ii)ndwendwe. Oku kuthetha ukuba siyafumaneka kwimibuzo / iingcebiso malunga nommandla okanye ingxoxo, kodwa ukuba ufuna ukuhamba ngendlela yakho, oko kunokwenzeka.
Iindwendwe zethu zamkelekile! Sithathela ingqalelo ubumfihlo njengoko undwendwe lwethu lufuna (ii)ndwendwe. Oku kuthetha ukuba siyafumaneka kwimibuzo / iingcebiso malunga nommandla…